Ilwareed.com » Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers Oo Beeniyay In Uu Raadinayo Goolhaye Kale Fasaxayana Reina Home Wararka
Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers Oo Beeniyay In Uu Raadinayo Goolhaye Kale Fasaxayana Reina
December 6, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers ayaa beeniyay warar sheegayay in uu raadinayo goolhaye cusub isla markaana uu qorsheynayo in uu iska fasaxayo goolhayaha koowaad ee Anfield Pepe Reina.
Sida ay qortay Press Association, Rodgers ayaa si xoog leh u diiday wararka sheegaya in uu dirayo Reina waxana uu sheegay in uu kalsooni ku qabo in goolhayaha xulka Spain ka mid ah uu soo wanaagsanaan doono.
Waxaa jiray warar sheegayay in Livepool ay qorsheynayo in ay la soo wareegto bisha Janaayo goolhayaha England ee kooxda Birmingham Jack Butland iyo goolhayaha dhalinyarada ah ee reer Jarmal Ron-Robert Zieler.
Hase ahaatee Rodgers ayaa u sheegay PA:”Ma jecli inaan ka hadlo warar suuqa balse waqtiga aan la joogo Liverpool magacyada la ila xiriirinayo waa kuwo aan macquul ahayn.
“Laakiin tan muhiimka ah ee aan ka hadlayo ayaa in aan raadinayn goolhaye kale.
“Waxaa la inala xiriirinayay goolhayaaal badan. Waxaan leenahay labo goolhaye oo wanaagsan – Pepe Reina iyo Brad Jones, oo ah qof daacad ah oo awooda in uu noqdo lambarka labaad ee goolhayaha kooxda.
“Meelaha kale ee aan dooneyno inaan kooxda ka horumarino waa qaar ahayn dhinaca goolhayaasha.”
Pepe Reina goolhayaheen koowaad waa mid kamid ah kuwa ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Ingiriiska,”ayuu sii raaciyay tababraha ka soo jeeda waqooyiga Ireland.